Ihotele yasekhaya-Greppi 5
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguHome
Isanda kulungiswa kwaye ifakwe ngokupheleleyo kwigumbi elinamagumbi amathathu, elibandakanya: Igumbi lokuhlala, ikhitshi elinendawo yoncedo, amagumbi okulala amabini amakhulu, amagumbi amabini okuhlambela, elinye kwigumbi lokulala. Le ndlu ikwimeko entle, izolile kwaye iqaqambe kakhulu, igqibelele ngabo bonke ubutofotofo kwaye ineesiphelo ezintle. Ifakwe kwindawo esetyenziswa luthutho lukawonke-wonke kwaye igcwele iinkonzo ezifana neendawo zokutyela kunye neevenkile ezinkulu.Ifanelekile kubakhenkethi kunye nabasebenzi ekufuneka bahlale ixesha elifutshane okanye elide.
Le ndlu yayiyilwe ngumyili wezakhiwo ukwenza uninzi lwazo zonke iinkcukacha.
Indlu bonke ubunewunewu kwaye umgangatho ophezulu akugqiba ezifana: parquet onke amagumbi, ukufudumeza of, umoya kuwo onke amagumbi, izindlu zangasese kunye chromotherapy, iqhoshana-dryer, umatshini ikofu, i-onti, Smart TV kunye ezamahala Netflix, ikhitshi elifakelwe kunye ne-intanethi engenamkhawulo.
Kwigumbi lokuhlambela uya kufumana iitawuli, isomisi seenwele. Ekufikeni kwakho uya kufumana iKit yoKwamkeleka kunye neemveliso zasimahla.
Iibhedi kunye naziphi na iibhedi zesofa ziya kuba zilungile xa ufika, awuyi kuba nexhala lokuzisa imiqamelo okanye amashiti.
Indlu sele ixhotyiswe ngayo yonke into oyifunayo ixesha elifutshane.
4.17 · Izimvo eziyi-6
Indlu ibekwe kwindawo entle kwindawo ezolileyo, ebonelelwa luthutho lukawonke-wonke kwaye igcwele iinkonzo eziphambili ezinjengeevenkile, iivenkile ezinkulu, iibhari kunye neendawo zokutyela.
Umbuki zindwendwe ngu- Home
Sono un ragazzo molto intraprendente, innamorato della vita e che ama viaggiare.
Ngexesha lokuhlala kwakho ungaqhagamshelana nam ngefowuni okanye nge-imeyile kwaye ndiya kuphendula ngokukhawuleza. Zonke iinkcukacha malunga nokungena ziya kuthunyelwa kuwe ngoko nangoko emva kokuba ubhukishe.
- Ukungeniswa (kuya kunxibelelana ngobubele kwiiyure ezingama-24 ngaphambili): ukusuka kwi-15 ukuya phambili
- Ukuphuma: phambi kwe-10:00
Ngexesha lokuhlala kwakho ungaqhagamshelana nam ngefowuni okanye nge-imeyile kwaye ndiya kuphendula ngokukhawuleza. Zonke iinkcukacha malunga nokungena ziya kuthunyelwa kuwe ngoko…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Milano